Homo Loves: At the Self Storage
ကျွန်တော် ရပ်ဝေးမြေခြား ဟောဒီ Big Apple မှာနေထိုင်ရတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ ကျွန်တော် မကြာခဏ ကြုံတွေ့ဖြစ်တဲ့ ရင်ခုန်ဖွယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှ ၀တ္ထုတိုလေးတွေအဖြစ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တော့ စာဖတ်သူတွေ က လူနှစ် ယောက်တွေ့ဆုံပြီးလိင်ကိစ္စဖြစ်ပျက်ကြတာ မြန်ဆန်းလွန်းသည်တဲ့။ ဘာကြောင့် နေထိုင်ရတာ အဆင်ပြေသည်ဟုပြောရ လည်းဆိုတော့ မိမိအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် အသက်မွေးမှုအလုပ်အကိုင်၊ နေထိုင်ဖို့နေရာ၊ မိမိရဲ့လိင်ကိစ္စအတွက် ဖုံးအုပ်ထားစရာ မလိုဘဲ့ မြို့ကြီးမှာ ကံကောင်းစွာ ပျော်ရွှင်နေရလို့ပါ။ ဝေမျှတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေက မြန်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင် ကျွန်တော်ကပဲ ခပ်မြန်မြန်လှုပ်ရှား တတ်လို့လားမသိ။ ကဲ...လွန်ခဲ့သော သုံးလေးရက်က ခပ်ဟော့ဟော့ ကောင်ငယ်လေးတစ်ယောက်နှင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ လေးတွေပြန်ပြော ပြပါဦးမယ်။
နေ့တစ်နေ့ရဲ့ ခရီးကိုစီစဉ်မှုဟာ Self Storage မှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ် ကတ္ထူသေတ္တာအချို့အတွက်လေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်နေ့တာဟာ အရေးတကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ကြာရှည်လွန်းလှပါတယ်။ သူများတွေလို ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ တစ်ယောက် ယောက်နှင့် date ပြီး ကဲဖို့ အခွင့်မရခဲ့တော့ ဆာလောင်နေတာ စိတ်ထဲမယ်။ လတ်ဆတ်ပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ ၀က်အူချောင်းတုတ်တုတ် ကြီးတွေ ကိုက်ဝါးပစ်လိုက်ရရင်ကောင်းမယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက ငနဲတွေကြား ခပ်အေးအေး အကဲခပ်ကြည့်တော့ ကျွန်တော် စိတ်ဝင် စားတဲ့ပုံစံ မျိုးတွေ တစ်ယောက်မှမရှိ။
Self Storage အများအပြားရှိတဲ့ဘက်ကားကိုဆွဲချလာတော့ ပိတ်ကုန်ပြီလားမသိ ကားတစ်စီးမှ ကားပါကင်မှာရပ်ထားတာမရှိဘူး ရုံးခန်း ဘက်ကြည့်ရင်လည်း လူမရှိဟန်ပါပဲ။ ရုံးခန်းဘက်ကိုနီးကပ်လာတော့ စာရွက်တစ်ခုခု တံခါးမှာကပ်ထားတာ သတိထားမိတာကြောင့် မနီးမဝေးမှာ ကားကိုပါကင်ထိုးလိုက်ရင်း ဘာစာရွက်များကပ်ထားလဲသွားဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ ဘာမှမရေးထားပါဘူး အထူးတလည်။ တံခါးဘေးက ခလုပ် အနီရောင်ကို နှိပ်ပါ၊ အကူအညီပေးမည့် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်ရောက်လာပါ့မည့် အကြောင်းလေးရေး ထားတာ။
ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာ တစ်မိနစ်သို့မဟုတ် နှစ်မိနစ်လောက်အကြာမှာ ခပ်သြသြအသံတစ်ချက် ပြန်ဖြေ သံကို စပီကာတစ်ခုကကြားရတယ် သူ အခုချက်ချင်းရောက်လာမယ်တဲ့။ ခပ်မြန်မြန် ကျွန်တော်လည်း 'အိုကေ'လို့ အဖြေပေးလိုက်ကာ ကားထဲက ကတ္ထူသေတ္တာအချို့ကို အပြင်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ ဂိတ်တံခါးဖွင့်သံကြားရကာ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက် ရုံးခန်းရှိရာ လျှောက်လှမ်းလာတာကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ ကျွန်တော်နှင့် နီးကပ်လာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံရပ်တန့်သွားပါရော။ ငယ်ရွယ်သော တက်ကြွဟန် အချိုးကျပြီး ဆွဲဆောင်မှု ပြင်းသော ကောင်ငယ်လေး။ ကောင်ငယ်လေးဆိုပေမဲ့ အရပ်အမြင့်က ၆ပေလောက်ရှည်တယ်။ အညိုရင့်ရောင် ဆံနွယ်ရှည်တွေနဲ့။ ဆံနွယ်အချို့က သူ့မျက်လုံးတွေပေါ် ဝေ့၀ဲကျနေသေး။ Levis' ဂျင်းဘောင်းဘီ ခပ်ကြပ်ကြပ်ကိုသူဝတ်ထားတယ်၊ Flannel ရှပ်အင်္ကျီနှင့် အလုပ် သမားတွေဝတ်တတ်တဲ့ boots ကို ခြေထောက်မှာလျှိုထားပြန်တာ။ ကျွန်တော်ဝတ်နေကျစတိုင်လ်ပဲဗျ။ ကျွန်တော့်ရှေ့ရောက် တော့ ပါးချိုင့်ပေါ် အောင်ပြုံးရင်း 'ပိတ်တော့မှာမို့ ၀င်းတစ်ခုလုံးလိုက်စစ်ဆေးနေတာကြောင့် ချက်ခြင်းမရောက်နိုင်တာ sorry ပါ'တဲ့ပြော တယ်။ ကျွန်တော် ကလည်း 'ရပါတယ် ဒီကတ္ထူသေတ္တာနှစ်ခုလောက်ပဲထားမှာ'လို့ဖြေလိုက်တာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်နံဘေးကနေ ရုံးခန်း တံခါး ဆီလျှောက် သွားတယ်။ အိုး...ကျွန်တော့်ငပဲက ဖြစ်သွားပြီး ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံဟာ ကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုအလားဖြစ်စပြုရော။ သူ ကသာ တောင်းဆိုသမှု ပြုရင် သူ့ ရှေ့ကျွန်တော် ဒူးထောက်ပြီး သူ့ပေါင်ကြားက ငပဲကြီးကို....ရှီး...အား..။
သူ တံခါးကိုဖွင့်ကာ ကျွန်တော့်ကိုအထဲဝင်စေပါတယ်။ 'ဘယ်အရွယ်အစားလိုချင်တာလဲဗျ' တဲ့ သူက ကျွန်တော့်ကိုမေးတာ။ 'ခပ်ကြီး ကြီးပေါ့' ကျွန်တော်က သူ့ပေါင်ခြံဆီအကြည့်တစ်ချက်ရောက်ရင်းပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ပစ္စည်းဆီရောက်သွားတဲ့ ကျွန်တော့် မျက်လွှာကိုပင့် သူ့မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်ရင်း ခပ်ကြီးကြီးသေတ္တာနှစ်လုံးဆို အိုကေပါတယ် လို့ထပ်ပြောလိုက်တယ်လေ။
သူ့မျက်နှာက သေလောက်တဲ့အပြုံးကို ဖော်ပြရင်း ကျွန်တော့်နံဘေးက ဖြတ်လျှောက်သွားရင်း သေတ္တာအလွတ်နှစ်လုံးကို ညွန်ပြတယ်။ 'တခြားဘာလိုသေးလဲ' သူကမေးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေက သူ့ပေါင်ခွဆုံကို အကြည့်တစ်ချက်ရောက်ပြန်တော့ ထူးထူးခြားခြား ကို သူ့အထုပ်အထည်ကပိုကြီးလာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ 'တခြားဘာအလိုရှိပါသေးသလဲခင်ဗျာ?' ကျွန်တော့်ကို ယဉ်ယဉ်ကျေး ကျေးထပ်ပြီးမေးကာ သူ့လက်က ဂျင်းဘောင်းဘီခွဆုံကို ဖြည်းဖြည်းလေးပွတ်သပ်တယ်လေ။
ကျွန်တော်ဘာမှမပြော ရပ်တန့်နေကာ သူ့ပေါင်ခြံက အထုပ်ကြီးထွားလာတာကို ကြည့်နေမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို လျှာနှင့် သရပ်ရင်း သူ့ကိုပြောမိတာက 'ဒီမေးခွန်းက မင်းကိုမေးရမှာလို့ ကိုယ်တော့ထင်တာပဲ'
သူစကားထပ်မဆိုတော့ဘဲ ကျွန်တော့်နံဘေးက တံခါးကိုလော့ခ်ျလုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပြန်လှည့်လာကာ နောက်ဘက်က အခန်း တစ်ခုစီ ဦးတည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ သူ့ပခုံးပေါ်ကနေ ကျွန်တော့်ကိုနောက်ပြန်စောင်းငဲ့ကြည်ပြီးပြောတာက 'ခင်ဗျားလိုချင်တဲ့ဟာ ဒီ အထဲမှာရှိတယ်လို့ ထင်တာပဲဗျ'တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ခပ်မြန်မြန် သူ့နောက်ကနေ အနောက်ဘက်ကအခန်းထဲလိုက်သွားလိုက်တာပေါ့။ ပေါင်ခြံက သူ့ငပဲကိုလက်တွေနှင့် ခပ်ဖြေးဖြေးပွတ်သပ်ကာ သူရပ်နေတယ်။ အပြုံးကမပျက် သူ့လက်တွေနှင့် ကျွန်တော့်ပခုံးကိုကိုင်ပြီး ဒူးထောက်ထိုင်အောင် သူခိုင်းတော့ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့်ပေါ့။
သူ ဂျင်းဘောင်းဘီက ကြယ်သီးကိုဖြုတ် ၊ ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲချ၊ပြီးတော့ သူ့ငပဲကို သူဆက်လက်ပွတ်သပ်နေပါတယ်။ အဖြူရောင်သူ့ အောက်ခံဘောင်းဘီအောက်က ငပဲကြီးဟာ ဆိုဒ်ကောင်းကောင်းရှိမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်။ နောက်တော့ သူက ဒီပစ္စည်းက 'ခင်ဗျားရှာနေတဲ့အရာလို့ထင်တာပဲနော်' လို့ပြောပြီး သူ့ငပဲကို ဘောင်းဘီအပြင်ဘက်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ငပဲက အမျိုးသားပိုင် ပစ္စည်းထဲမှာ တော်တော်ပုံစံလှတာပဲ။ သူ့ငပဲက မမာ့တမာအနေအထားရှိပြီး ကြည့်ရတာ ၆လက်မလောက်ရှိနေပြီ။ သူ့ငပဲကို ကိုင်ပြီး ခပ်ဖြေးဖြေးသူ့ဘာသာစထုနေတာနဲ့တင်မက သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကိုကိုင်ကာ ငပဲဆီနေရာချပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကိုဖွင့် သူ့ငပဲခေါင်းကို အရင်စငုံလိုက်ပါရဲ့။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ သူ့ငပဲဟာမာတောင်လာပြီး အနည်း ဆုံး ၇လက်မလောက်ရှည်လာကာ တုတ်လည်းတုတ်လာပါတယ်။ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းအနောက်ဘက်ကိုဆက်လက် ကိုင်ထားပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာကို သူ့ငပဲဆီပိုပြီး မျက်နှာမူစေတယ်။ မကြာမီမှာပဲ သူ့ငပဲက ကျောက်ဆိုင်ကျောက်သားအလားဖြစ်ကာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်အတွင်းပိုင်းထဲအထိ ဖိပြီးသွင်းတယ်။ နောက် ပြန်ပြီးတော့ ဆွဲနှုတ်ပြန်ရော။ သူ့စိတ်ကြိုက်လုပ်နေတာကို ခဏတော့ လွှတ်ထားလိုက်တယ်။ ဒါမှ သူ့အကြိုက်ကို ကျွန်တော်သိပြီးပြုစုနိုင်မှာလေ။
နောက်တစ်ကြိမ် လျောကနဲပါးစပ်ထဲကို ဖိသွင်းချိန်မှာလက်နဲ့ အသာသူ့ငပဲကိုဆွဲကိုင်လိုက်ကာ သူ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကို ကျွန်တော် စတင်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ငပဲထိပ်ပိုင်းလေးကို လျှာနှင့်ပတ်လည်လျက်၊ အသာလေးငုံကာ တပြွတ်ပြွတ်စုပ်၊ ကျွန်တော်တတ်သမျှနှင့်ပြုစု တာပေါ့နော်။ သူ့ငပဲရဲ့ထိပ်ပေါက်ကလေးက အရည်ကြည်လေးတွေစို့ထွက်လာတော့မှ သူ့ငပဲခေါင်းကို စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေခြင်းမှ ရပ် တန့်လိုက်ပါတယ်။ အသက်ကို၀၀ရှူ၊ ပါးစပ်ကိုဟကာ သူ့ငပဲတစ်ခုလုံး ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲရောက်နိုင်သမျှ သွင်းလိုက်တာ လည်မျိုထဲ ရောက်ကာ အော့အံမိမလိုဖြစ်မှရပ်ဖြစ်တယ်။
သူ အထုတ်အသွင်း အသာလုပ်နေပြီးမှ တစ်ချက်အပြင်ဆွဲအထုတ်မှာ ကျွန်တော်ထပ်မသွင်းစေတော့ဘဲ လက်နဲ့ထိန်းကိုင်ကာ စုတ်မှုတ် ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့နှုတ်ဖျားမှ ညည်းညူသံတွေထွက်လာတာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်ပြုစုတာကို သူကြိုက်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှား ပါတယ်။ ခဏကြာတော့ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို ဆွဲကိုင် ပါးစပ်ကိုဟစေသာ သူ့ငပဲကိုထည့်ပြီး အထုတ်အသွင်းလုပ်ပါရော။ ကျွန်တော့်-ီး စုပ်မှုထက်အလွန် ပိုပြီး ခံစားချင်ဟန်တူရဲ့။
ကျွန်တော့်ငပဲကို ထိန်းကိုင်ကာ ရွှေဥတွေကို လျှာလေးနှင့်လျက် တစ်လုံးခြင်းငုံစုပ်ပေးပါတယ်။ သူ ငြိမ်ပြီးခံစားနေတော့ ကျွန်တော့်လက် ချောင်းတွေက သူ့တင်ပါးရဲ့အလယ် ခရေ၀ရှိရာဆီကို ရှာဖွေမိတာပေါ့။တင်းပြီး လုံးဝန်းနေတဲ့ သူ့တင်သားတွေကို ပွတ်သပ်ဖျစ် ညှစ်ပြီး သကာလ လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေကို တင်ပါးအကွဲကြောင်းထဲသွင်းသွင်းကြည့်ရတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို အားရပါးရစုပ်မျို လိုက်တိုင်း သူ့တင်ပါးတွေက ကျစ်ကျစ်ပြီး မာသွားတာဗျ။ရွှေဥတွေကို လျာနှင့်လျက်ပြီး ကစားနေတုန်းတော့ သူ့ခရေ၀ထဲလက်ချောင်း လေးတွေ အသာထိုးထည့်ကြည့်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်နေသလဲဆိုတာ မကြာခင်သိလာရပါပြီ။ သူ့ဆီကရမည့် အရသာတစ်ခုခု စမ်းသပ်ရယူချင်နေခြင်းပါ။ သူ့ရဲ့အတွင်း ပိုင်းအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေကိုလျာနှင့်မွှေရင်း သူ့ခရေ၀ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ကလိမိပါတယ်။ ကျွန်တော် ညင်သာစွာ ဒါပေမဲ့ အားပါ စွာဖြင့် သူ့ကိုတစ်ဖက်လှည့်ပြီး ကုန်းစေတော့ သူက Pro တစ်ယောက်လို အလိုက်သင့်ဗျ။မို့မို့ဖောင်းပြီး ကားကားစွင့်နေတဲ့ သူ့တင် သားတွေကို အသာဖြဲကိုင်ပြီး ပန်းသွေးရောင်ထနေတဲ့ ခရေ၀ကိုကြည့်ရင်း 'ဂလု' ကနဲ တံတွေးမျိုချမိပါရဲ့။ တင်ပါး အကွဲကြောင်းတ လျှောက်နှင့်တကွ ခရေ၀အားလုံးကို လျာကစားပစ်လိုက်တယ် သူ့နှုတ်ဖျားကညည်းညူသံတွေထွက်ကရော။
သူ့အသက်ရှူသံဟာ ပြင်းထန်လာပြီအခု။ ပြီးတော့ ညည်းညူသံဟာ ပိုမိုသိသာလာပြီး သူ့တင်ပါးတွေကျွန်တော့်မျက်နှာမြှုပ်သွားတော့ မတတ်နောက်ပြန်ဖိတယ်။ သူ့ငပဲထိပ်က အရည်ကြည်တွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်နေရော။ 'Oh yeah! ဖင်ကိုကောင်းကောင်းလျက်ပေးပါ...အ၊ လျာနှင့်ထိုးပေး...အ...အ' တဲ့ သူ့နှုတ်ဖျားက မိန့်မူးဖွယ်ထွက်လာပါတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ခရေ၀ကို ဆက်ပြီး ကလိနေတော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တဖြည်းဖြည်းတုန်လာကာ သူ့ရွှေဥတွေဟာလည်း ကျစ်ပြီး ပေါင်ခြံ ကိုကပ်စပြုလာပြီ။ ကျွန်တော်သိတယ် သူ့ရွှေပြွှန်က နို့ပျစ်ပျစ်တွေပန်းထုတ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ။ ကဲ...တစ်ခါ ကျွန်တော်က ဦး ဆောင်ပြီးသကာလ သူ့ကိုကျွန်တော့်ဘက်ပြန်လှည့်ကာ မျက်နှာမူစေလိုက်ပါတယ်။ သူ့ငပဲက ကျွန်တော့်ကိုတည့်တည့်ကြီး မြှားတံလို ချိန်ရွယ်နေရော။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားထဲမှာ သူ့ငပဲထိပ်က အရည်ကြည်တွေကြောင့်ရော ကျွန်တော့်တံတွေးများကြောင့်ရော စိုရွှဲနေပါပြီ။ ကျွန်တော် ခပ်ဖွဖွရွရွလေး စုပ်ပြုပေးနေတာမှာ သူနောက်ဘက်ကိုပြန်ဆုတ်ပြီး ငပဲကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ် ဟာ စတင်ပြီး တုန်ခါလာတာကိုလည်း ခံစားရပါရဲ့။ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းပေါ် ထိန်းထားရင်း နှုတ်ဖျားကတော့ ညည်းညူ သံတွေဟာ အားပါပါ မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေထဲရှိနေဆဲ သူ့ငပဲဟာ ပိုမိုမာတောင်လာသလို ငပဲပေါ်မှာရှိ သွေးကြော ကြီးတွေဟာ ထောင်ထနေရော။ ကျွန်တော်တစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်း စုပ်မျိုလိုက်ရာမှာတော့ သူ့ငပဲက နို့ပျစ်ပျစ်တွေဟာ ပါးစပ်ပြည့်ခမန်း ထုတ်တော့တယ်။ ကျွန်တော်က မလွှတ်သေးဘဲဆက်ပြီး စုပ်ပြုနေတော့ သူ့ခမျာ ခြေဖျားတွေ ဒိုးဒိုးဒန့်ဒန့်ဖြစ်ကာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ထပ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ဖြည့်သည်ပေါ့။
သူ့ငပဲဟာ မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း မာထန်နေပြီးခဏ တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားကာ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာ ပျော့ပျောင်းသွားပါတယ်။ သူ့ငပဲကိုအသာပြန်ဆွဲနှုတ်တာကို ကျွန်တော်ခွင့်ပြုလိုက်တာမှာ ငပဲထိပ်ဝက အရည်လေးတွေ တွဲလွဲခိုနေတော့ ကျွန်တော့်လျှာဖျားလေး တွေက တဆတ်ဆတ်ကစားဖြစ်သေးတာပေါ့နော်။
ပါးစပ်ထဲက အရည်တွေကို အမှိုက်ပုံးထဲထွေးထည့် ပါးစပ်ကို တစ်ရှူးနှင့်သုတ်ရင်း ကောင်လေးမျက်နှာကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ မျက်နှာဟာ ကျေကျေနပ်နပ်ကိုပြုံးလို့။
'၀ှီး' 'ဒါကြုံဖူးသမျှ blowjob ထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲ' တဲ့သူက။
ကျွန်တော့်ပခုံးတွေကို ထိန်းကိုင်ပေးရင်း ကျွန်တော်ကြမ်းပြင်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ရာကနေထဖို့ကူညီပါတယ်။ သူ့ဘောင်းဘီကိုပြန်ပြီးဆွဲ တင်ဝတ်ကာ ကျွန်တော်တို့ အရှေ့ရုံးခန်းဘက်ကို ပြန်ထွက်လာကြတာပေါ့။
'Ok, အစ်ကို့ ကတ္ထူသေတ္တာတွေအတွက် ဘယ်လောက်ကျမလဲ?'
'အို...အဲဒါတွေအတွက် ကျသင့်ငွေကို ရှင်းပြီးပြီလို့ထင်တာပဲဗျ' သူကပြောလေရဲ့။
ဘယ်လိုလဲ ဘော်ဒါတို့ရဲ့ ကောင်ချောလေးနှင့် အခွင့်သင့်လို့ တွေ့တယ်။ ဆန္ဒညီတော့ ပတ်သက်တယ်လိင်ကိစ္စ။ မြန်တယ်ပြောပြော မဖြစ်နိုင်ဘူးပဲပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ ဖြစ်ပျက်ပတ်သက်ခဲ့ပြီပဲလေ။ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်ပုံပြင်မှတ်ပေါနေ့ာ်.... တာ့တာ။
Alex Aung (29 Nov 2011)
Posted by Min Lay at 7:53 AM